အရောင် Sudoku, Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည် ငါက Mac ပါ
Sudoku အရောင် များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 4,99 €နှင့်ကန့်သတ်အချိန်အဘို့ဖြစ်၏ လုံးဝအခမဲ့ ထဲမှာ Mac က App Store ကို။ Color Sudoku သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းကိုကစားရန်အတွက်အရောင်အသွေးအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Sudoku ဂိမ်းသည်နံပါတ်များအစားအရောင်များနှင့်ပြည့်နေသည်။ Sudoku အရောင်ဖော်ပြသည် ပုံစံများနှင့်ယုတ္တိဗေဒ Que သငျသညျပုံမှန်နံပါတ်များဂိမ်းထဲမှာရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အစပြုသူမှကျွမ်းကျင်သူအထိ၊ သင့်အားစိန်ခေါ်လိမ့်မည် အခက်အခဲငါးခုအဆင့်ဆင့်။ Sudoku သည်ကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သည် ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်.
La ရောင်စုံဘီး ရွေးချယ်ထားဆဲလ်န်းကျင်စေသည် အရောင်နှင့်မှတ်စုထားခြင်းအလွန်လွယ်ကူသည်။ နှင့်အသစ်သော option ကို လမ်း ဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြတ်လမ်းတစ်ခုပေးသည်။
Sudoku အရောင် ၎င်းတွင်လူတိုင်းသိသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝဆန်းသစ်တီထွင်စေသည်။ သင်သည်သင်၏ယုတ္တိအလားအလာများကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုကစားလိုပါကသင်၏ကစားပွဲသည်သင်ဖြစ်သည်။ ပို့စ်ရဲ့အဆုံးမှာခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုထားခဲ့ပါ Mac App Store သို့တိုက်ရိုက် download linkအဲဒါကိုသင်၏ iOS စက်အတွက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည် appstore.
အရွယ်: 20.7 ကို MB
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: baKno ဂိမ်းများ
© 2015 baKno ဂိမ်းများ။
compatibility: OS X 10.6.6 နှင့်အထက် 64-bit processor
ကုန်ချ Sudoku အရောင် တိုက်ရိုက်ကနေ Mac က App Store ကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါ၌၎င်းကိုဝယ်နိုင်မှတိုက်ရိုက် link ကိုထားခဲ့ပါ အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုးနှင့်လိုအပ်သည် iOS 6.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်။ နှင့်သဟဇာတ iPhone ကို, အိုင်ပက် y iPod touch။ ဒီဂိမ်းကအရမ်းစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးသင့်ကိုစွဲလန်းစေလိမ့်မယ် မက်, iPhone ကို, အိုင်ပက် y iPod touch သင်ဤဆောင်ပုဒ်ကိုကြိုက်လျှင်နာရီပေါင်းများစွာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » အရောင် Sudoku ကို Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည်